Jaal Seeyfuu Muummee (1948-2020) | Advocacy for Oromia
Qabsoon bilisummaa ummata Oromoo tan arra akka aduu barcaatti hangaatee diina keessaa fii alaa rooraasaa jirtu, kaleeysa dukkana wahuu keessatti arkuun hin dandayamne turte. Haala akkasii keessatti, ijji iftiina arraa arkuun, murannoo fii jeeynummaa hoonga hin qabneen, kanneen taraarrii xurree ganamaa tiif jiruu fii jireenya isaanii daammota godhan keessaa tokkoti. Seeyfuun abbaa isaa Muummee Aadamii fii haadha isaa Mardiyaa Aadamirraa toora bara 1948, Konyaa Harargee Bahaa, Aanaa Dadar ganda Duuydanaa ja’amu, kan magaalaa Qobboo-rraa, jihaa Calanqootti, amna miilaa tiin sa’aa takka fagattutti, toora bara 1948, nama dhalate.
Seeyfuun barnoota ammayyaa kan naannoo isaa jiru xumuree kan Jiddu Galaa tiif Biyyoo Adaree dhaqe. Achitti, odoo kutaa lammaffaa barachaa jiruu, hujiin seedata jimaa jala hambifatte. Seedanni jimaa kan barnootarraa isa fudhate, akkaan tolaa dhufee, odoo hin turin, gurgura naannoo bira kutee, daldalaa Hargeeysatti ergu tahe. Tarkaanfiin jimaa biyya alaatti eerguu horiin walitti baasee, jiruun toltee fii, makiinaan mooraa dhaabatte. Garuu, lakkumaan, sadoo keeysa jiru daran, haalli jireenyaa ummata Oromoo tii fii miidhaan diinni irraan gayaa jiru yaachisutti seene. Kanarraa kan ka’e, namoota firummaan, waahelummaanii fii hujiin walitti fiddu waliin waanni haasawuu fedhu karaa ummanni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa itti bahurratti fala barbaaduu tahe. Keessaa huu, eega Elemoo Qilxuu, qananii keessa ture dhiisee, qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromoo tiif Adanirraa biyya seenee wareegame booda, sab-boonummaan daran qoma fudhattee, sammuu malees, khaznaa isaa tan sabaa godhuu murteeyfachiifte.
Mootummaan Ceehumsaa jijjiirama bu’uraa akka hin finne gaafa hubatame, hidhata karaa daldalaa tiin Soomaalotaa waliin qaburratti irkachuun, bulchiinsa Soomaalota Hargeeysaa waliin hariiroo siyaasaa akka uumuuf ramadamee, jalqaba bara 1992, karas deeme. Eega achi dhaqe boodaa, hujuma wal fakkaattuuf, Hargeeysaa fii Jabuutii jidduu daddeemutti seene.
Seeyfuu Muummee, dhukkaba Koovid-19 ja’amu, kan yaroo ammaa adunyaa rooraasaa jiruun qabamee, araraafama torbaan sadihii booda, Caamsaa 15, bara 2020, biyya Ameerikaa kutaa Nebraskaa, magaalaa Sioux City-tti boqote. Seeyfuun qeeyroo fii qarree Oromiyaa malees, abbaa joollee kudha tokkoo ti. Gumaachi sossooha qabsoo bilisummaa Oromoo tan ganamaa tiif godhe, galmee seenaa qabsoo keessatti qalama dahabaa tiin tan barreeyfamtu.
Rabbi isaaf jannata firaa fii aaliif jabina haa kennu!